नेपाल आइडल रवि ओडको ‘दिलको फ्रेममा’ (भिडियोसहित) – सुदूरखबर डटकम
नेपाल आइडल रवि ओडको ‘दिलको फ्रेममा’ (भिडियोसहित)
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder June, 05 2019
काठमाडौं, जेठ २२ । दोस्रो नेपाल आइडल रवि ओडको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘दिलको फ्रेममा’ म्यूजिक भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ। गीतमा ओडलाई गायिका पुष्पा पौडेलले स्वरमा साथ दिएकी छन् ।
दीपक शर्मा रहेको गीतको भिडियो सुब्रतराज आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा पुष्पल खड्का र आँचल शर्मा देखिएका छन् । भिडियोमा युवापुस्ताको माया प्रेम र रोमान्टिक अवस्थालाई गज्जबसँग देखाउन खोजिएको छ ।
गीतको भिडियोमा गायक ओड पनि अभिनय देखिएका छन् । भिडियो सार्वजनिक गरिएको २४ घण्टा नबित्दै करिब साडे २ लाख बढी दर्शकको माया पाउन सफल भएको छ ।
जिल्ला सेक्रेटले नै विप्लव समूह त्यागी जेलवाटै नेकपामा प्रवेश
भ्रष्टाचार बिरुद्ध उत्रिएका ज्ञानेन्द्रलाई कास्की प्रवेशमा रोक
बर्षै पिच्छे बाघको संख्या बर्दिया राष्ट्रिय निकुङ्जमा बढ्दै !
नेपाल बैंक लिमिटेडले माग्यो ५ सय २ जना कर्मचारी ! सामान्य कर्मचारी देखी कनिस्ट सहायक सम्म
मन्त्री योगेश भट्टराईमाथी जहाजमा दुर्व्यबहार प्रति फेरी यस्तो बोले मन्त्रीले ! ‘मलाई ‘तँ’ भनेर औँला ठड्याएर यस्तो शब्द प्रयोग गरे’ (भिडियो हेर्नुस्)
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको कम्पनीले ल्यायो बजारमा जता तेतै स्याउ !
पूर्बी नेपालको झापामा ५०० बढी डेंगुका बिरामी, २ जनाले गुमाए ज्यान
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल आइडलले अडिसन नगरेकोमा सांसद लेखराज भट्टको आपत्ति